ဗီဒီယို | RayHaber | raillynews
ရောင်ခြည်Tube VIDEOS မီးရထားဗီဒီယိုများ၊ မြန်နှုန်းမြင့်ရထားဗီဒီယိုများ၊ TCDD ဗီဒီယိုများ၊
တူရကီ၏ပထမဆုံးမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်သည် Bayraktar AKINCI အားလပေါင်းများစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော AKINCI မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုမေလ ၂၄ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ တနင်္ဂနွေနေ့၊Tube [ပို ... ]
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သောAtaköy - Basın Ekspres - İkitelli Metro Line ရထားဂဟေဆော်ပွဲအခမ်းအနားကို Ekrem remmamoğlu, Istanbul Metropolitan Municipality (İBB) နှင့်စည်ပင်သာယာဗျူရိုကရက်များ၏ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Ataköy - [ပို ... ]
TürkHavacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. T-129 ATAK ထိုးစစ်နှင့်နည်းဗျူဟာကင်းထောက်ရဟတ်ယာဉ် (TUSAŞ) မှတီထွင်ခဲ့ပြီးမေလ ၁၉ ရက်၊ Atatürkအမှတ်တရ၊ လူငယ်နှင့်အားကစားနေ့များကိုအထူးလေယာဉ်ဖြင့်ပျံသန်းခဲ့သည်။ တူရကီလေကြောင်းနှင့် [ပို ... ]
အမျိုးသားကာကွယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော PKK မှခဲယမ်းမီးကျောက်များနှင့်ပစ္စည်းများကိုအီရတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း Cukurca နှင့် Haftanin ဒေသများတွင်သိမ်းဆည်းရမိကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ အမျိုးသားကာကွယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏ထုတ်ပြန်ချက်တွင်၊ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းကွန်မန်ဒိုများကဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ် [ပို ... ]
KARAYEL Tactical UAV System သည်ရှာဖွေရေးနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအတွက်နေတိုး၏ 'Airworthiness in Civilspace in Airspace' စံ STANAG-4671 နှင့်အညီဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြီးထုတ်လုပ်သည့်ပထမဆုံးနှင့်တစ်ခုတည်းသော Tactical မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ဖြစ်သည်။ KARAYEL စနစ်တစ်ခုစီ [ပို ... ]
Baykar ကာကွယ်ရေးအင်ဂျင်နီယာများမှဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသော AKINCI ထိုးစစ်မပါသောဝေဟင်ယာဉ် (TİHA) ၏ဒုတိယရှေ့ပြေးပုံစံသည်မကြာမီ၎င်း၏ပထမဆုံးပျံသန်းမှုကိုစတင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ Baykar ကာကွယ်ရေးနည်းပညာမန်နေဂျာSelçuk Bayraktar Akıncı [ပို ... ]
Gaziantep မှÇorluသို့ပလပ်စတစ်ကုန်ကြမ်းများကိုသယ်ဆောင်သည့်ကုန်ရထားသည်ဝန်ကြီးKaraismailoğluနှင့်အတူ Marmaray မှတဆင့်ဖြတ်သန်းသွားသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီး Adil Karaismailoğlu, Marmaray ကိုပထမဆုံးဖြတ်ကျော်လာတဲ့ပြည်တွင်းကုန်ပစ္စည်း 08.05.2020 [ပို ... ]
ဒုတိယအကြိမ်အမျိုးသားလေယာဉ်တင်သင်္ဘော TCG TRAKYA ကိုဝယ်လိုအားဖြင့်ထုတ်လုပ်မည်
တူရကီသမ္မတကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းဥက္က္ဌ။ ဒေါက်တာ mailsmail Demir၊ SSB ၏တရားဝင်အရာရှိTube သူကသူ့ရုပ်သံလိုင်းမှတဆင့်မေးခွန်းများကိုဖြေသည်။ သူ၏မိန့်ခွန်းတွင် mailsmail Demir သည်ကဏ္ in ၏အထွေထွေအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ရာတွင်ဒုတိယ LHD သည် TCG TRAKYA နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ [ပို ... ]
UVH-170 မောင်းသူမဲ့ကုန်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရဟတ်ယာဉ်အသစ်ဖြင့် UAVOS သည်ပထမဆုံးရောင်းချသူမှ ဦး တည်ရာသို့ကြိုတင်ရွေးချယ်ထားသောလမ်းကြောင်းများကို အသုံးပြု၍ အလိုအလျောက်အလိုအလျောက်လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက်လမ်းကြောင်းမှတူညီသောလမ်းကြောင်းဖြင့်ရောင်းချသူသို့ပြန်သွားသည်။ [ပို ... ]
Bananas ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်း TCDD Tasimaci သည် ၈ ရက်အတွင်းဗန်မှအီရန်သို့သွားသောအခါ!
၈ ရက်အတွင်းဗင်မှအီရန်သို့အဝေးပြေးယာဉ်သွားသောအခါငှက်ပျောသီးပျက်စီးသွားသည်။ ; CHP Istanbul လက်ထောက်ရှေ့နေချုပ် Mahmut Tanal သည်သူ၏ကိုယ်ပိုင်တွစ်တာအကောင့်မှတဆင့် TCDD ကုန်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဗီဒီယိုတစ်ကားမျှဝေခဲ့သည်။ မျှဝေဗွီဒီယိုပေါ်တွင် TCDD [ပို ... ]
၅.၅၆ ခြေမြန်ရိုင်ဖယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည် ၆၅၀၀၀ ကျော်လွန်သည်
သမ္မတကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းဥက္ကIndustry္ဌ။ ဒေါက်တာ တရားဝင်ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်များဖြင့်မျှဝေထားသောပို့စ်တွင် Ismail Demir သည် ၅.၅၆ မီလီမီတာမီလီမီတာစက်နှင့်ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်း (MKEK)၊ Kalekalıpနှင့်Sarsılmazမှထုတ်လုပ်ပြီးဖြန့်ဝေသည် [ပို ... ]
National Electric Train Set ကိုမေလ ၂၉ ရက်တွင်စမ်းသပ်မည်
၀ န်ကြီး Varank က“ တစ်နာရီကို ၁၆၀ ကီလိုမီတာမြန်နှုန်းမြင့်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားရထားစမ်းသပ်မှုတွေဟာမကြာခင်မှာစတင်မှာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေကဒီရထားတွေကိုအသုံးပြုလိမ့်မယ်။ မေလ ၂၉ ရက်နေ့တွင်ရထား ၃ စီးကိုစမ်းသပ်ပြီးစမ်းသပ်ပါမည်။ 160 ခုနှစ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ် ၂ ရှိ Istanbul IETT ဘတ်စ်ကားတွင်ဒဏ်ရာရသွားသည်
အစ္စတန်ဘူလ်ရှိလမ်းရထားသည် IETT Bus2ဒဏ်ရာရခြင်း၊ အစ္စတန်ဘူလ်၊ Sultangazi တွင်ရထားများနှင့်ဘတ်စ်ကားများတိုက်မိခဲ့သည်။ IETT ဘတ်စ်ကားနှင့်တိုက်မိမှုကြောင့်ဘတ်စ်ကားမောင်းသူ Sultangazi Cebeci Mahallesi ရှိ Old Edirne ကတ္တရာပေါ်Topkapı ဦး တည်ရာလမ်းကြောင်း [ပို ... ]